Sofia Vergara သူမ၏ရေကူးကန်အား Turquoise စားဆင်ယင်နှင့်ကိုက်ညီသည် - သတင်း
ပြည်တွင်း ကြံ့ခိုင်ရေး အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Gynaec အသိပညာ & ပညာရေး ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Celeb စတိုင် ထုတ်ကုန်များ ချက်ပြုတ်နည်းများ ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ဆိုဖီယာ Vergara အောက်မေ့ရာပွဲနေ့ကိုစတိုင်ဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ (ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သူမ၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်နောက်ဖေး၏တစေ့တစောင်းကိုပေး၏။ )
တနင်္လာနေ့တွင် ၄၈ နှစ်အရွယ်မင်းသမီးသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်တွင်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်သူမ၏အသည်းများနှင့်အတူနေသာသောအားလပ်ရက်တွင်ပျော်မွေ့နေသည့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်တွင်ပုံရိပ်များစွာကိုတင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဖမ်းယူအတွက် ခေတ်သစ်မိသားစု ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိမ်းဝတ်စုံကိုအားကစားနှင့်သူမ၏ရေကူးကန်အားဖြင့်ကော့တေးပေါ် sipping ဖြစ်ပါတယ် ... နှင့်အရောင်ညှိနှိုင်းအပေါ်အစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုဖီယာ Vergara (@sofiavergara) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ယခုနှစ်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအချိန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်အတွက်ဆင်မြန်းနေရောင်ခြည်ပိတ်ဆို့ခြင်း [coctail emojis] အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ နှုန်း နေ့စဉ်စာတိုက် , ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စားဆင်ယင် Walmart မှာသီးသန့်ရရှိနိုင်ပါသည်သော Vergara ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုကနေဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲ၊ အတိအကျစတိုင်ကိုအများပြည်သူမသိသေးပါ။
သူမအနေဖြင့်သူမ၏ခွေး Bubbles၊ သား Manolo Gonzalez Vergara နှင့် pals Alejandro Asen၊ Luis Balague နှင့် Barry နှင့် Jason Peele တို့၏ဆလိုက်ရှိုးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အိုးနဲ့သူမရဲ့ ၀ မ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဂျိုးမန်န်ဂျယ်လိုကရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တောင်ပြုခဲ့သည်။ သူမသည်မင်္ဂလာသတိရအောက်မေ့ပွဲနေ့တနင်္ဂနွေကိုရေးခဲ့သည်။
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကသူမအကောင့်ပေါ်မှဓာတ်ပုံများမျှဝေသောကြောင့်သူမမိသားစုကိုဗဟိုပြုသည့် post သည်သူမအစာကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသည်။ တကယ်တော့ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူမသည်redရာမအနီရောင်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်သောအံ့မခန်းမော်ဒယ် throwback မျှဝေခဲ့သည် Vergara က“ ငါဒီစာကိုရေးဖို့မေ့နေတယ် #tbt မနေ့ကဒါပေမယ့်ငါဒီသည်အဘယ်မှာရှိခဲ့သည်ကိုလည်းမေ့, ဒီဘာတွေလုပ်နေလဲသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ငါဘာလုပ်နေလဲ !!!! ???? သေချာဘို့က 90 မိုင်ယာမီဖြစ်ခဲ့သည်။
နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံး TBGs နှင့်မိသားစု BBQ ဓါတ်ပုံများဝေမျှရန် Vergara ကိုစောင့်ဆိုင်း။ မရပါ။
သက်ဆိုင်သော: SOFÍA VERGARA HOLIDAY INSTAGRAM POST တွင်သူမ၏မိသားစု၏မျိုးဆက် ၃ မျိုး၏ပုံများကိုမျှဝေသည်။
Categories Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် အရေပြား အပြင်အဆင်